Umthetho wokuphatha umayelana namalungelo nezibopho zezakhamizi namabhizinisi kuhulumeni. Kepha umthetho wokuphatha uphinde ulawule ukuthi uhulumeni uzithatha kanjani izinqumo nokuthi yini ongayenza uma ungavumelani nesinqumo esinjalo. Izinqumo zikahulumeni zibalulekile emthethweni wokuphatha. Lezi zinqumo zingaba nemiphumela efinyelela kude kuwe. Kungakho kubalulekile ukuthi uthathe isinyathelo ngokushesha uma ungavumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela ethile kuwe…
Umthetho wokuphatha umayelana namalungelo nezibopho zezakhamizi namabhizinisi kuhulumeni. Kepha umthetho wokuphatha uphinde ulawule ukuthi uhulumeni uzithatha kanjani izinqumo nokuthi yini ongayenza uma ungavumelani nesinqumo esinjalo. Izinqumo zikahulumeni zibalulekile emthethweni wokuphatha. Lezi zinqumo zingaba nemiphumela efinyelela kude kuwe. Kungakho kubalulekile ukuthi uthathe isinyathelo ngokushesha uma ungavumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela ethile kuwe. Isibonelo: imvume yakho izodilizwa noma kuzothathelwa izinyathelo zokuphoqelela wena. Lezi yizimo ongamelana nazo. Vele kukhona ukuthi kungenzeka ukuthi ukuphikisa kwakho kwenqatshwe. Unelungelo futhi lokufaka umthetho wokufaka isikhalo nokuphikiswa kokuphikisa kwakho. Lokhu kungenziwa ngokuthumela isaziso sesikhalazo. Abameli bezokuphatha Law & More ingakweluleka futhi ikusekele kule nqubo.
Inqubekela phambili emthethweni wokuphatha imvamisa iyimisebenzi yommeli weqiniso, yize usizo lommeli kungaphoqelekile. Ngabe awuvumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela efinyelela kude kuwe? Bese uthinta abameli bokuphatha be Law & More ngqo. Singakusiza!